R/Wasaare Rooble la’aantiis ma qabsoomi karaa shirka Golaha Amniga Qaranka? - Bulsho News
Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo been abuur ku tilmaamay Warqad lagu...
R/Wasaare Rooble la’aantiis ma qabsoomi karaa shirka Golaha Amniga Qaranka?
Waxaa maanta lagu wadaa inay kulan isugu yimaadaan Guddiga amniga qaranka, kuwaas oo uu horraantii bishan uu isugu yeedhy Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, si Guddiga looga horjeediyo warbixinta laga dalbaday Hay’adda Nabad Sugidda iyo Sirdoonka Qaranka.
Shirkan ayaa ku soo begmaya xili khilaaf uu u dhaxeeyo madaxda ugu sareysa dalka. Haddaba maxay yihiin shuruudaha qabsoomidda shirkaasi? suurtagal se ma tahay inuu dhaco kulankaasi? arrimahaas ayaa waxaan ka wareysannay Xussein macalin Maxamuud oo ah lataliyihii hore ee amniga qaranka ee madaxweyne Farmaajo iyo madaxweynihii ka horeeyay ee Xassan Sheekh Maxamuud ahna Madaxa machadka Hiraal.
by Bulsho Media 44 seconds ago 44 seconds ago
New Zealand reports record Covid cases as experts...
Xog: Dhowr Arrimood oo dib u dhigay weerarkii...
Georgians vote in local election after arrest of...
Boqor Maxamed Jaamac oo shaaciyey mas’uuliyiin dal kale...